WHO: wararka been abuurka ayaa caqabad ku noqday la dagaallanka coronavirus – Hornafrik Media Network
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay wararka been abuurka iyo xogaha khaldan ee la isla dhexmarayo ay caqabad ku noqdaan jawaab ka bixinta cudrkan cusub ee coronavirus.
Agaasimaha guud ee hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ,Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa warfidiyeennada u sheegay wararkaasi been abuurka iney saameeyeen shaqaalaheenna har iyo habeen ku howlan xal u helista cudurkan.
“Waxaa kale oo aan doonayaa inaan si tifatiran uga hadlo muhiimadda ay leeyihiin xogaha rasmiga ah, Sahacabkuna waa iney helaan fursad ay ku heli karaan xogaha dhabta ah ee la xidhiidha sida uu qofka isaga ilaalin karo cudurkan iwm” ayuu yiri.
“Hay’adda WHO ahaan lama dagaallameyna oo keli ah caabuqa corona, balse waxay sida oo kale la dagaallameysay wararka been abuurka ah ee caqabadda ku noqon kara mas’uuliyadda na saaran.
“Wargeyska the Guardian oo boggiisa hore cinwaan uga dhigay, “Xogaha Khaldan ee ku saabsan cudurka coronavirus iney noqon karaan xogaha ugu khatarta badan ee cudurka laga faafiyo.”
Wargeyska The Guardian qaybta uu kaga faalloodo araa’da, wuxuu ku daabacay qoraal uu Dr Adam Kucharrski uu ku doodayo sida ugu wanaagsan ee wararka been abuurka ee la faafiyo looga hortagi karo iney tahay “in caabuqan loo daweeya si la mid ah faayrasyada caadiga ah.”